Sheekh Shariif iyo Safiirka Ingiriiska oo ka wada-hadlay arrimo ay kamid yihiin Doorashooyinka – Kalfadhi
Sheekh Shariif iyo Safiirka Ingiriiska oo ka wada-hadlay arrimo ay kamid yihiin Doorashooyinka
Madaxweynihii hore ee Dowladdii KMG aheyd ahna Guddoomiyaha Madasha Xisbiyadda Qaran Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo safiirka dowladda Ingiriiska ee Soomaaliya ayaa ka wada-hadlay xaaladdaha dalka iyo doorashooyinka dalka.
Labada dhinac ayaa si gaar ah uga wada-hadlay, in doorashooyinka ay ku dhacaan xiligooda, xaaladdaha xanuunka COVID-19, xiriirka dowladda dhexe iyo dowlad-gobolleedyada, dib-u-heshiisiinta Galmudug, wada-hadaladda Somalia iyo Somaliland iyo in la abuuro jawi caafimaad qaba oo ay doorashooyinka ay ku dhacaan.
Guddoomiyaha Madasha Xisbiyadda Qaran ee Sheekh Shariif Sheekh Axmed, ayaa carabka ku adkeeyay in doorashooyinka oo xiligooda ku dhacay ay tahay waxa la wada sugayo.
Dalka Soomaaliya ayaa waxaa uu kamid yahay dalalka uu sida darran u saameeyay xanuunka COVID-19, waxaana tirada dadka laga helay xanuunka ay kor u dhaaftay 800 oo qof.
Dhinaca kale, Mudane Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa ku baaqay in baaritaan hufan lagu sameeyo Diyaaradii ku burburtay Degmadda Berdaale ee Dowlad-gobaleedka KGS.
Diyaarad gargaar Daawo ee COVID 19 u waday dadweynaha ku nool Degmadda Berdaale ee Dowlad-gobaleedka KGS ayaa waxaa qabsaday shil bar-tilmaameed ah.
Baarlamaanka Puntland oo lacag gaareysa $10,000 oo doolar ku deeqay Gurmadka Qardho
Madaxweyne Farmajo oo bogaadiyay dadaalka Xukuumadda ee xakameynta cudurka Covid-19